Indlela yokufumana uluhlu lwazo. iisayithi ze-edu ze-backlinks?
Ukufumana iinqununu ezivela kwiiwebhusayithi ezigunyazisiweyo eziphezulu kukufana nokuzifumana. iisayithi ze-edu njengeenjini zokukhangela ezi ziza zihloniphekile, zibaluleke kakhulu kubasebenzisi kunye negunya eliphezulu. Kwiimeko ezininzi, kunzima ukwakha uluhlu lwazo. iisayithi ze-edu ze-backlinks ukuba uncinci okanye isiqalo esisungulwe ngokutsha. Ngaphezu koko, ukuba uphuhlisa ishishini lakho kwi-intanethi, kungekhona kwimfundo okanye kwicandelo likarhulumente, kuya kuba yingxaki yokubonelela. Abafundi beesayithi kunye nomxholo onokubangela umdla kubo.
Xa uyakha izalathisi, kufuneka uhlawule ingqalelo kwi-Domain Authority ne-Domain Domain Rating. Ezi zimbini zee-metriki zokuhlola imgangathweni zifana kwaye ziyakwazi ukucacisa ukuba kubaluleke kangakanani ukuba umnxibelelwano olulodwa luvela kwindawo ethile. Ngokubeka izixhumanisi zakho kwigunya eliphezulu. i-website, iiwebhsayithi ikunika inzuzo eninzi. Okokuqala, unokukwazi ukubeka umxholo wakho ngokulula. iiwebhusayithi ze-edu, kwaye mhlawumbi ziza kufumana isikhundla esiphezulu ngexesha elifutshane. Ukongezelela, uya kufumana i juice yeluncedo ngokubambisana nezi zangaphandle.
Eli nqaku lizinikezelwe kwiinkqubo zokwakha izixhumanisi ezenza uluhlu lwazo. iisayithi ze-edu ze-backlinks. Ndiza kukufundisa indlela yokunyusa amanqanaba kwaye ufumane igunya lakho lolawulo kwisikhululo.
Fumana i-backlink ukusuka kwi-PR ephakamileyo. I-website ye-edu
Ukuba ungathanda ukufumana iikhonkco ezichaphazelekayo, kufuneka uphucule i-website yakho yokuqala (iimpazamo ezichanekileyo zekhowudi, ukuseka inkqubo edibanisayo, ukulungisa imethadatha nokudala umxholo obalulekileyo).
Iyona nto ibaluleke kakhulu kwaye ifaneleke kumathuba okubambisa i-web imithombo iquka i-Wikipedia,. gov kunye. doma domains. Ezi ndawo zithwala uhlobo oluthile lobunzima kunye neGoogle. Le mithombo yewebhu ithwala ixabiso elikhulu kubasebenzisi kwaye nayiphi na i-backlink ebeka kumaphepha abo inokuthenjwa.
Makhe sixoxe ngokubanzi ngeendlela zokufumana. i-edu kunye. I-backlink:
Njengomthetho. i-edu kunye. iiwebhsayithi zibhubhise apho iposi ishicilelwe ngokusisiseko kunye nomxholo wemfundo. Ungayinakunakalisa eli thuba lokwakha unxibelelwano. Yingakho ukuba unokulandela isicwangciso sakho sokwakha isixhumanisi kwaye uqale ngesiphephe engqondweni, ezinye zeziqulatho oceba ukuzakhela zona sele. okanye. iisayithi ze-edu zikhomba kuyo. Ukuphunyezwa kwale ndlela yoqhagamshelwano lwekhonkco, uya kukwazi ukufumana iziqulatho ezinxulumene nomxholo ngaphakathi komxholo wakho.
Ukubonelela ngeengxowa-mali kwi-niche yakho
Kunengqiqo ukubonelela ngeengxowa-mali zemfundo eyahlukeneyo, ngokukodwa kulabo aba, ngokuthe ngandlela-thile, bahambelana noshishino lwakho. Ngokomzekelo, ukuba uthengisa izixhobo zonyango, unokubambisana neeyunivesithi zezobugcisa ezibonelela abafundi babo ngezaphulelo, i-giveaways okanye i-scholarships. Kuya kukunceda ukubuyisela kwi-niche yakho kwaye ufumane i juice enxulumene ne-PR ukusuka phezulu. imithombo yewebhu yewebhu. Ngaphezu koko, unako abafundi ukuba bathumele umsebenzi kuwe, ukuze ukwazi ukusebenzisa njengomxholo. Yaye ukuba ufumana umbhali olungileyo, ungamqesha njengomlobi wokubambisana nenkampani yakho rhoqo Source .